Wese munhu anoda basa rakanaka uye dzidzo ichavabatsira kuenda kure. Nekudaro, vanhu vazhinji vanofanirwa kusiya basa ravo uye zvinangwa zvekudzidzisa gore rimwe nerimwe. CMOAPI inoziva kukosha kwakadzama kwedzidzo, ndosaka tichibatsira kudzidzisa vaverengi vedu pamifananidzo uye zvigadzirwa zvekamera nekutarisazve kwedu uye nekurudziro. Iwe haufanire kubhadhara zvakawandisa kune zvigadzirwa zvako kana ukashandisa zviwanikwa zvekuongorora zvatinokupa pano.
Yedu CMOAPI Scholarship kusimudzira kutsva kwatinodada kwazvo kuzivisa. Iyo $ 2000 yegore negore kudzidza iyo yakagadzirirwa kubatsira vadzidzi kuti vazive zviroto zvavo zvedzidzo uye yebasa. Iyi fanicha inopihwa mudzidzi mumwe gore rimwe nerimwe kuti ibatsire kubhadhara mari yekudzidzira. Tiri kutsvaga kupamhidzira huwandu hwehuwandu hweiyo gore rinotevera. CMOAPI Scholarship idiki diki diki kubva kudivi redu kubatsira mudzidzi kutevera kurota kwavo. Kana iwe uchifarira chirongwa cheufundu uye uchida kutora chikamu mumakwikwi, ndapota verenga ruzivo rwese rwunopihwa pazasi zvakanyanya kunyatsotarisirwa.
·Yakagamuchirwa kana kuti ikozvino kuenda kune imwe yekoroji yakagamuchirwa yepurogiramu yakazara yepasi-graduate kana chirongwa chekudzidza muUnited States.
·Zvishoma kugadzirisa GPA ye3.0 (kana yakaenzana).
·Uchapupu hwekunyoresa mukosi yepashure kana dhigirii degree inodikanwa.
·Nyora chinyorwa pane unoti "Chii chinonzi Tsika Synthesis & Chibvumirano Chekutsvaga?"
·Iwe unofanirwa kutumira nyaya yako kwatiri kana pamberi pa 7 Zvita 2020.
·Iwe unogona kutumira yako nyaya (mune MS Word fomati chete) neemail kune [email inodzivirirwa]
·Usakanganwa kutaura zita rako, email, uye nhamba yefoni mune yako application.
·Unodikanwa zvakare kutaura ako koreji / yunivhesiti zvinhu mune yako application.
·Chinyorwa chete icho chichava chakasarudzika uye chakasikwa chinotarisirwa kumakwikwi.
·Anokunda achafonerwa kuburikidza ne e-mail uye anofanira kupindura mukati memazuva mashanu kuitira kuti agamuchire mubairo. Kana pasina mhinduro inogamuchirwa mukati menguva iyoyo, mumwe anokunda achasarudzwa kuti agamuchire mubairo.
·Zvinyorwa chete izvo zvichagamuchirwa uye nguva yekupedzisira isati yasvika ichaongororwa mumakwikwi.
·Izvo zvinyorwa zvichazotongwa pane akawanda ma parameter. Mimwe yacho ndeiyi: kusarudzika, kugona, kufunga, kukosha kweruzivo rwunopihwa, girama uye maitiro nezvimwe.
·Vakahwina vachaziviswa muna Zvita 15, 2020.
Yedu Yakasarudzika Policy:
Tinoita chokwadi chekuti hapana ruzivo rwevanhu vevadzidzi runogoverwa, uye ruzivo rwese rwega rwunochengeterwa kushandiswa kwemukati chete. Isu hatipe chero ruzivo rwevadzidzi kune vechitatu mapato chero chikonzero, asi isu tinochengeta kodzero yekushandisa zvinyorwa zvakapihwa kwatiri nenzira chero yatinoda. Kana iwe ukaendesa chinyorwa kuCMOAPI, iwe unotipa kodzero dzese kune izvo zviri mukati, kusanganisira zvevaridzi zvezvakataurwa zvemukati. Izvi ndezvechokwadi kunyangwe iko kuendesa kunogamuchirwa semukundi. CMOAPI.com inochengetera kodzero yekushandisa rese basa rakatumirwa kuti rinyorwe sezvo richiona rakakodzera uye parinofungidzirwa kuti rakakodzera. Vanokunda vachasimbiswa kana vakakwanisa kupa humbowo hwekunyoreswa kuyunivhesiti yakatenderwa, koreji kana chikoro. Izvi zvinosanganisira mufananidzo weazvino mudzidzi ID, zvinyorwa zvechikoro, tsamba yeuchapupu, uye kopi rechikoro chechikoro. Wechipiri anokunda achasarudzwa kana mukwikwidzi wekutanga asingakwanise kupa izvi zviratidzo.